Dawlada Soomaaliya Oo Si Rasmi Ah U Shaacisay Khasaaraha Ka Dhashay Qarax Ka Dhacay Xarunta Banaadir – somalilandtoday.com
Dawlada Soomaaliya Oo Si Rasmi Ah U Shaacisay Khasaaraha Ka Dhashay Qarax Ka Dhacay Xarunta Banaadir
Muqdisho (SL-T)Dawlada Soomaaliya Oo Si Rasmi Ah U Shaacisay Khasaaraha Ka Dhashay Qarax Ka Dhacay Xarunta Banaadir
Qaraxi galabta ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa la sheegay iney ku dhinteen 6 qof oo ay laba guddoomiye degmo ka mid yihiin.
Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo BBC u warramay ayaa sheegay in qaraxi galabta ka dhacay xaruunta dowladda hoose ee Muqdisho ay ku dhinteen 6 ruux, oo ay laba ka mid ah yihiin guddoomiyeyaal degmo, agaasimayaal iyo mas’uuliyiin kale oo maamulka gobolka banaadir ka tirsan ay ka mid yihiin.
Wuxuu sida oo kale sheegay qaraxaasi iney ku dhaawacmeen 6 qof oo kale oo uu ka mid yahay Guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho.
Wasiir Maareeye oo ka hadlayey xaaladda uu ku sugan yahay Guddoomiyaha Gobolka banaadir Injineer C/raxmaan Yariisow wuxuu sheegay sida ay dhakhtarrada ay u sheegeen isaguna uu soo arkay inuu dhaawaciisa uusan halis ahayn.
“Dadka uu qaraxaasi dhaawaca uu ka soo gaaray waxaa lagu dabiibayaa Isbitaalka Digfer oo dhaawacyada ugu badan la geeyey dhaawacyada sida ay kala yihiinna warbixinta ugu dambeyso waxaan ka sugeynaa dhakhaatiirta.” ayuu yiri.
Sidoo kale Wasiir Maareeye waxa uu sheegay in Hay’adaha Ammaanka ay wadaan baaritaan ku aadan falkii argigixisanimo islamarkaana ay faah faahin dheeri ah dib ka soo sheegi doonaan.
“Dowlad ahaanna waan cambaareyneynaa ficilka aragaggixisada ee bahalnimada ah waa sida uu hadalka u dhigaye, oo lagu soo qaaday mas’uuliyiinta soomaaliyeed ee ka shaqeeynayey sidi uu dalkan uu nabad u heli lahaa dadka soomaaliyeedan ay horumar iyo noola u heli lahaa.”
“Shacabka Soomaaliyeedna waxaan u sheegeynaa wax cad weeye inaan dagaal kula jirno waxa uu ugu yeeray argagixisada caalamiga ah iyo kuwa gudaha ee la duufsaday dagaal kula jirno, shacabka Soomaaliyeedna waxaan leennahay dagaalkaasi lagu hayo argagixisada iney ku gacan siiyaan dowladda” ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo BBC u warramay.
Weerarka Ismidaaminta galabta ka dhacay xaruunta dowladda hoose ee Muqdisho waxaa sheegtay ururka Al-shabaab.
Qaraxa ayaa ka dhacay xaruunta dowladda hoose ee magaalada Muqdisho xilli uu maamulka Gobolka Banaadir uu halkaasi uga socday shir toddobaadla ah oo ay yeeshaan.
Xaruunta gobolka Banaadir waxay ka mid tahay xaruumaha dowladda ee sida weyn ammaankooda loo adkeeyo.